Fisolokiana vola,merkiora,uranium Tra-tehaka tao Antsirabe ireo jiolahy
Tra-tehaka tany amina lehilahy efatra ny taratasin-tany na “titre foncier” hosoka, vola, merkiora, mena-bato, uranium izay samy sandoka avokoa.
Voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny «commissariat central» Antsirabe ny 2 jolay lasa teo tokony ho tamin’ny 5 ora sy 30mn hariva izy ireo. Teo amin’ny renivohitr’i Vakinankaratra no nahitana azy ireo ka izao voarohirohy amin’ny resaka fisolokiana sy fampiasana taratasy hosoka izao. Araka ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirenena, efa misandrahaka amin’ny sehatra maro ny fampiasana hosoka ataon’ireto tovolahy voasambotra ireto. Milaza izy ireo fa mahita merkiora, uranium ary mena-bato. Nanamafy ihany koa amin’ny olona sendra azy fa tena misy ireo zavatra voalaza ireo. Tsy misy avokoa anefa ireo voatanisa rehetra ireo fa dia fisolokiana tsotra izao no ao ambadika. Taorian’ny fitarainan’olona sy ny angom-baovao voarain’ny polisy miasa ao Antsirabe dia natao ny vela-pandrika sy fanarahan-dia ka izao nahatrarana azy ireo izao.